Boaty afovoany kely manafina hafatra | Famoronana an-tserasera
Raha misy zavatra tiako ho entina amin'ireto andalana ireto dia izy ireo hevitra mamorona izay manandrana zavatra hafa araka ny hita hatreto. Tsy dia mora loatra izany satria indraindray isika dia mahatsapa fa noforonina ny zava-drehetra, saingy tsy izany, ny fahafantarana ny fikarohana dia mety ho gaga amin'ireo sary nolokoina isika amin'ny hazo hazo, famantarana hita ao toerana mitokana an'ny tanàna, voninkazo vitsivitsy izay fosily no ampiasainy toy ny akora na izay mety ho izy ireo kitapo dite sasany ho canvas amin'ny fialamboly sary mahafinaritra ho avy.
Mieritreritra aho fa avelantsika ho hitan'ireto hevitra ireto izay tonga amintsika koa boaty afangaro kely vitsivitsy izay manafina hafatra izay miandry ny hamakian'iza na iza ary aiza no ahitantsika ireo karazana lahatsoratra manazava, manavao na manaitra antsika. Ity ny hevitry ny Shop3xu ary izy ireo dia alternatera iray amin'ireo karatra fandraharahana manandrana ho tena izy araka izay tratra ary azo ampiasaina amin'ny hetsika manokana izay tianay ny hahagaga ny mpitsidika.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny singa sasany amin'ireo karatra fandraharahana, boaty fanomezana na izay mety ho kely indrindra, ireo boaty afisy ireo noforonin-tanana avy amin'ireo tena izy ary miloko ny tsirairay amin'izy ireo hanomezana azy endrika manokana. Miaraka amin'izany, ny tsirairay amin'izy ireo dia zavatra manokana.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity hevitra boaty lalao ity dia ny hafatra azo zahana eo amin'ny fonony sy amin'ilay miafina ao amin'izy ireo tsirairay avy, dia miteraka tsy ampoizina kely ho an'ilay olona manokatra azy ireo.
Hevitra mamorona sy tany am-boalohany izay, ho an'ity noely ityAngamba mety ho mora aminao ho an'ny iray amin'ireo hetsika manokana ireo, araka ny efa nolazaiko. Azonao atao ny manaraka ny mpamorona an'ireny boaty match ireny ao aminy Instagram na miditra amin'ny fividianana iray avy etsy.com.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Boaty afokasoka kely manafina hafatra tsy ampoizina
eechezarreta dia hoy izy:
Tiako fotsiny izy ireo?
Valio i eechezarreta
Izay ilay hoe, tianao fotsiny izy ireo: =)
Hira 50+ izay tsy tokony hanjavona ao amin'ny lisitry ny mpamorona sary